The Hermit Discover Discover Discover Online ▷ ▷️
Cinga ngeemfihlakalo zobomi bakho bangaphakathi.
Intsingiselo yeHermit kwiTarot
La Ikhadi leHermit Tarot liyakwazi ukwamkela utitshala ngendlela efihlakeleyo. Lo mthombo wolwazi oluyimfihlakalo awuyi kwenza kube lula ukuba umfundi afumane ubulumko, kuba kuthatha ixesha kunye nokucinga ixesha elide ukuqonda oko akwaziyo. Rhoqo thetha ngaphandle kwamagama, okanye kwiilwimi zamandulo nezingezizo, ukunxibelelana neziqalelo, izilwanyana kunye nendalo uqobo.
Ngelixa i-hourglass yayiyinto yokuchonga kwangoko amakhadi e-tarot IHermit, awona makhadi anamhlanje atshintshe isikweko, abonisa ukukhanya okungaphezulu okanye okuncinci okukhutshwe kwilanga lakhe. Nangeyiphi ndlela, Ikhadi lokudlala likaHermit lisikhumbuza ngexabiso lexesha kude nobomi bempilo yoluntu, ukuphumla i-ego ekudibaneni nendalo.
Zinike ixesha lokucamngca. Musa ukuvumela abanye bangene endleleni yakho.
IHermit ikucebisa ukuba ucinge nzulu ngononophelo. Iimfuno ezibekwe kubo beziphezulu, zibanika ixesha elincinci lokucingisisa. Ngelixa unesipho sokuqonda iimpembelelo ezinkulu ezibandakanyekileyo, udinga ixesha labucala lokujonga amanyathelo exesha elizayo.
Awunakuzivalela egumbini lakho imizuzu elishumi elinesihlanu kwaye unethemba lokufumana izisombululo ezinzulu.. Udinga ukuhlukaniswa ngakumbi kunye nexesha lokuziqhelanisa kunye nenkqubo.
Ngoku ingalixesha lokuba uxelele wonke umntu ukuba akushiye wedwa. Xa uzilungiselele ngokupheleleyo, unako kwaye uzimisele ukunika abanye izinto abazifunayo.